Shirkadda abaabulay taxane ah oo muxaadarooyin ku saabsan wax soo saarka ammaanka iyo dhaawacyada gargaarka degdegga ah. - Shiinaha Suzhou Ocan polymer Waxyaabaha
Nadiifi Waraaqda PVC ee Barafka qabow
Shirkadda abaabulay taxane ah oo muxaadarooyin ku saabsan wax soo saarka ammaanka iyo dhaawacyada gargaarka degdegga ah.
In view of taxane ah oo saamaynta by shil keenay oo ku saabsan Degmada Cusub 6,16, si ay awood shaqaalaha in ay sii kor loogu qaado wacyiga ee wax soo saarka ammaan ah oo kor loogu qaado isku-tasho aqoon, on subaxda 21, shirkadda martiqaaday Dr. Lu ka Hospital Suzhou Ruixing in la sameeyo taxane ah oo arrimaha ammaanka shaqaalaha.
Ka hor bilowgii seminar tababarka, General Manager Zhu sameeyey kooban dhiganta taxane shirkadda ee shaqada dhaqancelinta on ilaalinta dabka in dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay. Waxa uu carrabka ku adkeeyay in hoggaanka magaalada ku lifaaqan muhiimadda ugu weyn ee 6,16, iyo Shirkadda waa in si adag raacdo xeerasha iyo xeerarka ku xusan by madaxda sare in la baabi'iyo dhammaan xadgudubyada xeerarka iyo qawaaniinta. Under weeyn ee soo socda shuruucda iyo qawaaniinta, waxaa lagama maarmaan ah in ay si adag u haleelaan faahfaahinta soo saarka ammaanka, iyo tallaabo kasta oo ku habka hawlgalka waa in la siiyo fiiro gaar sabab.
Ka dib markii Mr Zhu waxaa soo koobay oo la wadaago, Dr. Lu noo keeneen aqoon on tallaabooyin taxaddar ah ammaanka iyo tallaabooyinka gargaarka degdegga ah in ay ahaayeen caadi ah in dhaawacyada. Waxay noo weheliso xaaladaha dhabta ah in la sameeyo qaar ka mid ah waxyaabaha aan ka ayaa laga yaabaa in ku lug leh shaqada iyo nolosha.
Content qaybsiga. Gaar ahaan in hawlgalka dhabta ah ee gargaarka koowaad, si ay u fududeeyaan qof walba fahamkiisa, Dr. Lu shakhsi muujiyeen noo on goobta, content kaniisadda waa mid aad wax ku ool ah, dadka jooga si dhab ah ay baran karaan si loo baro.
Dhacdadani waxa ay muujinaysaa in shirkadda siiyaa mudnaan sare si ay wax soo saarka ammaanka, iyo si gaar ah u qabanqaabisaa waxbarasho aqoonta la xiriira. Waxaa la rumeysan yahay in dadka oo dhan ay leeyihiin doonaa xaddi gaar ah oo goosashada ka dib dhigta oo sii goosta, kuwaas oo maan, oo iyagu waxay qaadan kartaa naftooda daryeelaan marka loo baahdo. Waayo, ururka si loo yareeyo khasaaraha qaar ka mid ah in la baajin karin.
waqti Post: Jun-25-2018
Xuquuqda daabacaadda - 2010-2017: Suzhou OCAN Polymer Material Co., Ltd Dhammaan Xuquuqda ayaa Leh.